Shabaab oo weli halis ku ah amniga Kenya 5 sano kadib weerarkii Westgate – Madal Furan
Hoy > Warka > Shabaab oo weli halis ku ah amniga Kenya 5 sano kadib weerarkii Westgate
Shabaab oo weli halis ku ah amniga Kenya 5 sano kadib weerarkii Westgate
Editor September 21, 2018 Warka 0
Kenya (Madal Furan) – Warbixin ay soo saartay hay’adda caalamiga ah ee xasaradaha iyo khilaafaadka ka faalloota ayaa lagu sheegay in Al Shabaab weli halis weyn ku tahay ammaanka dalka Kenya, Shan sano kadib weerarkii Westgate Mall.
Warbixinta ayaa cinwaan looga dhigay “Al Shabaab Shan sano kaddib weerarkii Westgate, weli waa halis ka taagan Geeska Afrika”, waxaaa lagu sheegay warbixinta in Al Shabaab bedeshay xeeladihii ay horay u adeegsan jirtay weerarada ay ka geystaan gudaha Kenya.
Tan iyo sannadkii 2015, Al Shabaab waxay xoogga saartay sidii ay dhallinyaro badan uga qoran lahayd gudaha Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ah ee Lamu sida ay tilmameyso warbixinta.
Al Shabaab ayaa sidoo kale isku dayay in ay dad taabacsan ku yeelato gobollada waqooyiga iyo bartamaha Kenya, iyadoo diiradda saareysa dhallinyaro horay u ahaa Christian, balse qaatay diinta Islaamka.
Warbixinta waxaa sidoo kale lagu xusay in Al Shabaab weerarradeeda xooggooda ay ka geystaan xadka Kenya iyo Soomaaliya, siiba qaraxyada lala eegto gawaarida ay leeyihiin dadka u dhashay Kenya, gaar ahaan ciidamada iyo shaqaalaha, iyadoo dhinaca kale lagu sheegay warbixinta in Al Shabaab ay xulafaysi la samaysay koox ka dagaallanta gobolka Pwani ee Tanzania oo xad la leh dalka Kenya.
Weerarkii Westgate Mall ee ka dhacay magaalada Nairobi ee Kenya ayaa dhacay 21-kii September 2013-kii, waxaana ku dhintay 71 qof, oo 62 ka mida ay ahaayeen dad rayid ah, Shan kalana waxa ay ahaayeen ciidamada Kenya halka Afarta hartana ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday.
Ku dhawaad 200 oo ruux ayaa la wariyay marka in ay ku dhaawacmeen, toogasho iyo dagaal dhexmaray ciidamda Kenya iyo raggii hubeysnaa Shan sano kahor 2013-kii.
Qarax Xooggan oo ka dhacay waddada Maka Al-mukarama ee magaaladda Muqdisho.
Daawo:- Siyaasi ku eedeeyey Muuse Biixi inuu waardiye ka yahay Facebooga
Miino safar u aheyd gudaha dalka Kenya oo lagu qabtay Beledxaawo